Raila oo kulamo ku saabsan BBI ka wado Kisumu | Star FM
Home Wararka Kenya Raila oo kulamo ku saabsan BBI ka wado Kisumu
Raila oo kulamo ku saabsan BBI ka wado Kisumu
Madaxa xisbiga ODM Raila Odinga ayaa ismaamulka Kisumu kulan kula qaadanaya guddoomiyaasha ismaamullada ee gobolka Nyanza, xildhibaano, aqoonyahaano iyo wakiillada golayaasha hoose ee dowlad deegaanadaas.
Waxaa uu doonayaa inuu ka dhaadhiciyo sidii ay u taageeri lahayeen geeddisocodka sharci beddelka ee BBI.
Qoraal uu dhawaan soo dhigay bartiisa rasmiga ee Twittarka ayuu ku sheegay in shirka oo ah mid wada-tashi uu weli socdo sidaas awgeedna uu rajeynayo in ay ka soo baxaan qodobbo muhiim ah.
Ku xigeenka madaxweynaha dalka William Ruto ayaa isna xaafadda Karen ee magaalada Nairobi shir kula qaadanaya xulafadiisa siyaasadeed.
Waxaa jiro warar sheegaya in kulanka diiradda lagu saaraya qorshaha Ruto ee doorashada guud ee 2022-ka iyo sida looga hor tagi karo mooshin isaga ka dhan ah oo uu xildhibaanka deegaanka Lugari Ayub Savula sheegay inuu baarlamaanka u gudbin doono.
Raila iyo Ruto ayaa si weyn ugu kala aragti duwan arrimaha sharci beddelka ee BBI.
Ku xigeenka madaxweynaha dalka ayaa qabo in aan la joogin xilligii jagooyin siyaasadeed loo raadin lahaa madax balse ay lagama maarmaan tahay in siyaasaddu ay noqoto mid ku saleysan danaha danyarta.
Ra’iisul wasaarihii hore ee dalka Mr. Raila Odinga ayaa dhankiisa u ololeynaya qorshaha BBI oo uu rumeysan yahay inuu horumar iyo xasilooni buuxda wadanka u horseedaya.
Previous articleDHAGEYSO:Muddo xileedka madaxweyne Farmaajo oo maanta ku eg
Next articleCiidanka amniga oo howlgal ka sameeyay magaalada Jowhar